Muxuu yahay qorshaha ay damacsan yihiin saraakiisha la wareegtay Beledweyne? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu yahay qorshaha ay damacsan yihiin saraakiisha la wareegtay Beledweyne?
Muxuu yahay qorshaha ay damacsan yihiin saraakiisha la wareegtay Beledweyne?
Beledweyne (Caasimada Online) – Warar naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanaan ah iyo dhaq-dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo magaaladaasi, kadib markii ay xalay xarumaha maamulka la wareegeen ciidamo hubeysan.
Ciidamadan oo u abaabulan hab beeleed, isla-markaana la magac baxay ciidamada bad-baadada Hiiraan ayaa waxaa hoggaaminayo Cabdullaahi Barre Cilmi oo ka tirsan guutada shanaad, qeybta 27-aad ee ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi Hiiraan.
Cabdullaahi Barre oo wareysi siiyey BBC-da ayaa shaaca ka qaaday in weli ay gacanta ku hayaan xafiisyada maamulka gobolka ee Beledweyn, xaaladduna ay haatan deggan tahay.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in aanay qaadi doonin tallaaba kale oo uga sii dari karto xaaladda cakiran ee haatan laga dareemayo magaalada Beledweyne.
Sarkaalkan oo horey u ahaa abaanduulaha guutada shanaad ee qeybta 27-aad ee ciidamada Xoogga dalka, balse xilka laga qaaday ayaa xusay inuu la soo xiriiray ugaaska deegaanka, kana dalbaday ina an xiisadda intaasi looga sii drrin, si xal waara loo helo.
Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in maleeshiyaad taabacsan janaraalka gadoodsan ee Xuud ay iyagunna soo galeen qeybo ka mid ah magaalada, halkaas oo ay ka bilaabeen dhaq-dhaqaaq looga soo horjeeda safarka la qorsheynayao ee Cali Guudlaawe.
Xaaladda ayaa haatan u muuqaneysa mid faraha kasii baxaysa, waxaana dhanka kale isla magaalada qeybo uga sugan saraakiil iyo ciidamo taabacsan madaxweynaha dowlad goboleedka HirShabelle Cali Guudlaawe, kuwaas oo dhowaan ka baxay magaalada Jowhar.
Si kastaba xiisadan ayaa sii xoogeysatay, kadib markii ay fashilmeen wada-hadalladii ka socday Beledweyn, waxaana kadib soo baxday in si awood ah Guudlaawe lagu geynayo magaaladaas, taas oo keentay in ciidamo ka soo horjeedo ay soo galaan magaaldaasi.